“Ma Ogolaan Doono In Mar Dambe Liverpool Horyaalka Ku Guuleysato” – Xiddig Ka Tirsan Man United Oo Usii Hanjabay Liverpool – Laacibnet.net
“Ma Ogolaan Doono In Mar Dambe Liverpool Horyaalka Ku Guuleysato” – Xiddig Ka Tirsan Man United Oo Usii Hanjabay Liverpool
August 1, 2020 Abdiwahab Ahmed
32 jirka khadka dhexe uga ciyaara Manchester United ee Nemanja Matic ayaa rumaysan in kooxdiisu ay culays weyn kusoo kordhin doonto horyaalka Premier League xili ciyaareedka dambe, isla markaana aanay ogolaan doonin in Liverpool iyo Manchester City ay iska maamushaan.
Matic waxa uu digniin gaar ah u diray Liverpool oo uu u sheegay in kooxdiisa Manchester United aanay mar dambe ogolaan doonin in Reds ay horyaalka ku guuleysato iyadoo toddoba ciyaarood hadhsan yihiin, sidii dhacday xili ciyaareedkii dhawaanta dhamaaday.
United oo ay ugu dambaysay inay horyaalka Premier League ku guuleysato sannadkii 2013 oo ahayd xilligii uu Sir Alex Ferguson ka fadhiisanayay ciyaaraha, ayaa ku dhibaatoonaysay inay afarta kaalmood ee ugu sarreeya ku tartanto, xili ciyaareedkana waxay si adag u loollameen Chelsea iyo Leicester City oo ugu dambayntii ay labadoodaba ka sare martay.
Laakiin ifafaalaha wanaagsan ee jamaahiirta usoo muuqday ayaa waxya noqotay in United ay iska celisay kooxihii waaweynaa, sida Manchester City iyo Liverpool, balse qaybtii hore ee xili ciyaareedka aad looga fogaaday, waxase Matic uu ku kalsoon yahay in aanay mar dambe dhici doonin in labadan kooxood iska maamushaan horyaalka.
“Aniga, shaqsiyan, waxaan jeclaan lahaa inaan horyaalka Premier League kula guuleysto Manchester United, waxayna ila tahay in kooxdayadu ay mar walba u baahan tahay inay horyaalka ku dagaallanto.” Ayuu yidhi Matic, waxaanu ku daray: “Mar walba waxaanu u baahanahay inaanu isku dayno inaanu sida ugu wanaagsan u shaqayso, waana sida aanu hadda samaynayo. Waxay ila tahay in aanaan kooxna u ogolaan doonin inay horyaalka ku guuleysato iyadoo toddoba ama 10 ciyaarood ka hadhsan yihiin dhamaadka. Ilaa dhamaadkana waanu dagaallami doonaa.”
Nemanja Matic waxa uu ku adkaystay in kooxdiisu ay xili ciyaareedka dambe ku dagaallami doonto inay koobka horyaalka ku guuleysato, waxaanu yidhi: “Dabcan, waxaanu haysanaa koox da’yar ah, laakiin tani cudur-daar nooma noqon doonto. Waxay ila tahay in ciyaartoydan da’da yari ay mar horeba xili ciyaareedyo yar soo ciyaareen. Sidaa darteed, laga bilaabo xili ciyaareedka dambe, waa inaanu u dagaallano horyaalka. Ma garanayo haddii aanu ku guuleysan doono, laakiin waxaan hubaa inaanu dagaallami doono illaa dhamaadka.”
aad iyo aad kalsoonidu waa qeeb kamid ah furaha guusha wayna ku guulaysan karaan horyaalka hadii ay dadaal iyo kalsoni yeeshaan waa in ay magacii iyo sumcadii man utd soo celiyaan